Coin Master 3.5.26 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.5.26 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Coin Master
Coin Master ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ဖေ့ဘုတ်ခ်သူငယ်ချင်းများနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသော spins နှင့်ထိပ်ရန်သင့်ဗိုက်ကင်းရွာတည်ဆောက်ရန်စီးနင်းမှု, တိုက်ခိုက်မှုများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကစားသမား Join!
သင်ကလာမယ့်အကြွေစေ့မာစတာဖြစ်ကြာသောအရာကိုရှိပါသလား သင်တို့ရှိသမျှသည်သူတို့၏ Hippie ဘုရင်, Warrior သို့မဟုတ်ဗိုက်ကင်း, အကောင်းဆုံး Pirate ဖြစ်ဖို့ကထွက်တိုက်ဖျက်ဖို့အချိန်နှင့်မှော်မြေများမှတဆင့်သွားလာနိုငျ!
ဒါကြောင့်အချိန်ပြန်ပေး, ဒိုင်းသို့မဟုတ်စီးနင်းမှုတိုက်ခိုက်ရန်ခံရ, သင့်ကံဇာတာကျဖို့ဘီးလည်။ သင်ကစားပွဲမှတဆင့်ခိုင်မာတဲ့ကျေးရွာများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အဆင့်ဆင့်တက်ရွှေ့နိုင်အောင်ဒင်္ဂါးပြားသို့မဟုတ်ရွှေကိုအိတ်အပေါ်လေယာဉ်ဆင်းသက်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ပြန်ပေးလော့အနိုင်ရ။ သငျသညျကိုတိုကျခိုကျဖို့ကြိုးစားနေသည်အခြားဗိုက်ကင်းမှသင်၏ရွာကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဒိုင်းလွှားအနိုင်ရ။ အင်အားအကောင်းဆုံးကျေးရွာနှင့်အများဆုံးပြန်ပေးလော့အတူအကြွေစေ့မာစတာဖြစ်လာ!
ကဒ်အထိုင်စက်မှတဆင့်ဒင်္ဂါးပြားဝင်ငွေပြန်ပေးလော့ရဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး, သင်လည်းခိုးယူနိုင်သည်! သင့်ရဲ့ရွာတည်ဆောက်ရန်လုံလောက်သောပြန်ပေးလော့ကယ်ဖို့မိတ်ဆွေရန်သူတိုက်ခိုက်သို့မဟုတ် RAID ။ အဆိုပါ piggy သည်ဘဏ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့မလိုအပ်ပါ! ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့သင်၏ရန်သူတို့ကိုဆန့်ကျင်အောင်ပွဲထွက်လာကြ၏။ စန်းပွ! သင့်ရဲ့ရွာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုအပေါ်လက်စားချေကိုယူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကွက်တိဥစ္စာကိုယူ! သင့်ရဲ့အကြွေစေ့ Dozer ကိုယူခဲ့ပြီးမှတဖန်ကြွယ်ဝသောရ! သင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတခြားရဲ့ရွာ၌ရှာတှေ့နိုငျတန်ဖိုးထားအရာကိုသိဘယ်တော့မှ!
လူအပေါင်းတို့သည် Card များကိုစုဆောင်း!
အဲဒါကိုလည်းဘဏ္ဍာအကြောင်းကိုဖွင့်ခြင်း, ပြန်ပေးလော့အကြောင်းကိုအမြဲမဟုတ်ပါဘူး! အစုံဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်နောင်လာမည့်ရွာပေါ်ရွှေ့ဖို့ကတ်များစုဆောင်းပါ။ အတူသင်သည်သင်၏အနိုင်ပေးအောင်နိုင်တိုင်းရွာ သာ. ကြီးမြတ်ပါလိမ့်မည်
သူတို့အားလုံးကိုစုဆောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သင်၏ကတ်များကုန်သွယ်မှု! ကြီးမားသောဆုလာဘ်များနှင့်ကုန်သွယ်မှုဘဏ္ဍာကိုဝင်ငွေအသစ် viking သူငယ်ချင်းများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို Facebook အသိုက်အဝန်း Join!
★အကြွေစေ့မာစတာ In-app ကိုဝယ်ယူမှုနဲ့အတူကိရိယာအားလုံးပေါ်တွင်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
သီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ဆုကြေးငွေများအတွက် Facebook ပေါ်မှာအကြွေစေ့မာစတာ Follow!
Facebook မှာ: www.facebook.com/coinmaster
မီနူးအပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဂိမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် Settings>> ပံ့ပိုးမှုသို့မဟုတ် support@coinmastergame.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ ကျေးဇူးပြု.
Coin Master အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Coin Master အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Coin Master အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
liberis2897 စတိုး32.64k
Coin Master ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Coin Master အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.5.26
ထုတ်လုပ်သူ Moon Active
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://moonactive.com/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: E9:D7:DC:0C:6F:A8:5D:5E:12:00:14:17:1B:ED:78:0A:E1:19:80:C5
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Lior Tal
အဖွဲ့အစည်း (O): Moon Active
Coin Master APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ